Vaovao - asidra voajanahary ho an'ny fiompiana anaty rano
Ny asidra biolojika dia manondro ireo fitambarana biolojika misy asidra. Ny asidra biolojika mahazatra indrindra dia ny asidra karboksilika, ny asidra dia avy amin'ny vondrona karboksil. Ny calcium calcium, acetic acetic, sns. Dia asidra biolojika, izay afaka mihetsika amin'ny alikaola mba hanjary esera.
★ Ny anjara asan'ny asidra biolojika amin'ny vokatra anaty rano
1. Atsaharo ny poizin'ny metaly mavesatra, ovao ny amoniaka molekiola ao anaty rano anaty rano ary ahena ny poizin'ny amoniaka misy poizina.
2. Ny asidra voajanahary dia manana ny famafana ny fandotoana menaka. Misy sarimihetsika solika ao anaty dobo, ka asidra biolojika no azo ampiasaina.
3. Ny asidra voajanahary dia afaka mifehy ny pH ny rano ary mandanjalanja ny fiasan'ny rano.
4. Izy io dia afaka mampihena ny viscosity amin'ny rano, manimba ny zavatra organika amin'ny alàlan'ny flocculation sy ny pitsiny ary manatsara ny fihenjanan'ny rano.
5. Ny asidra biolojika dia misy surfactants marobe, izay afaka manavesatra metaly mavesatra, manala haingana, mampihena ny fihenjanana anaty ao anaty rano, mamoaka oksizenina anaty rivotra haingana ao anaty rano, manatsara ny fahafaha-mitombo oksizenina ao anaty rano, ary mifehy ny loha mitsingevana.
★ Hadisoana amin'ny fampiasana asidra biolojika
1. Rehefa mihoatra ny fenitra ny nitrite ao anaty dobo dia hampihena ny pH ny fampiasana asidra organika ary hampitombo ny poizin'ny nitrite.
2. Tsy azo ampiasaina amin'ny sodium thiosulfate. Ny sodium thiosulfate dia mihetsika amin'ny asidra hamokatra dioksida solifara sy solifara ifotony, izay hanapoizina ireo karazana fiompiana.
3. Tsy azo ampiasaina amin'ny humate sodium izy io. Ny sôdiôma humate dia alkaline malemy, ary hihena be ny vokany raha samy ampiasaina.
★ Ireo tranga miantraika amin'ny fampiharana ny asidra organika
1. Dosage: raha ampidirina amin'ny sakafon'ny biby anaty rano io asidra biolojika io ihany, fa tsy mitovy ny fifantohana faobe, hafa ihany koa ny vokany. Misy fahasamihafana eo amin'ny tahan'ny lanjan'ny lanja, ny tahan'ny fitomboana, ny tahan'ny fampiasana sakafo ary ny fahombiazan'ny proteinina; Ao anatin'ny karazana asidra voajanahary, miaraka amin'ny fitomboan'ny asidra voajanahary, ny fitomboan'ny karazan-kolontsaina dia hampiroborobo, fa rehefa mihoatra ny laharana iray izy io, ny fampidirana asidra voajanahary avo loatra na ambany loatra dia hanakana ny fitomboan'ny karazana kolontsaina ary mampihena ny fampiasana ny sakafo, ary ny fampidirana asidra organika mety indrindra ho an'ny biby anaty rano samihafa dia samy hafa.
2. Manampy fe-potoana: hafa ny vokatry ny fampidirana asidra biolojika amin'ny dingana fitomboan'ny biby anaty rano. Ny valiny dia naneho fa ny vokatra fampiroboroboana ny fitomboana dia ny tsara indrindra amin'ny dingana tanora, ary ny tahan'ny lanjany dia avo indrindra, hatramin'ny 24,8%. Amin'ny dingana lehibe, ny vokany dia miharihary amin'ny lafiny hafa, toy ny anti-ketrona.
3. Fangaro hafa ao anaty feed: ny asidra biolojika dia misy fiatraikany synergistic miaraka amin'ireo akora hafa ao anaty feed. Ny proteinina sy ny tavy ao anaty sakafom-bary dia manana hery buffering avo kokoa, izay afaka manatsara ny asidra ny feed, mampihena ny hery buffering ny feed, manamora ny fandraisana sy ny metabolism, ka misy fiatraikany amin'ny fihinanana sakafo sy digestion.
4. Toerana ivelany: ny mari-pana amin'ny rano, ny fahasamihafana ary ny firafitry ny karazan'olona fitoplankton hafa amin'ny tontolo iainana rano, ny fividianana kalitao tsara, ny fambolena tsara sy ny tsy misy aretina, ary ny hakitroky ny tahiry mirindra dia tena manandanja indrindra amin'ny vokatra tsara indrindra amin'ny asidra voajanahary .
5. Asidra biolojika mitambatra mavitrika kokoa: ny manampy mavitrika bebe kokoa dia afaka mampihena ny habetsaky ny asidra voajanahary ary manampy tsara kokoa ny tanjona.
Fotoana fandefasana: Jun-24-2021